असल कार्यहरू भनेका के हुन् र तिनीहरूलाई कसरी प्रकट गरिन्छ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
असल कार्यहरू भनेका के हुन् र तिनीहरूलाई कसरी प्रकट गरिन्छ
कुन मापदण्डअनुसार व्यक्तिका कामहरू असल वा खराब हुन् भनी निर्धारित गरिन्छ? यो कुरा तेरा विचारहरू, शब्दहरू, र व्यवहारहरूमा तँसँग सत्यतालाई अभ्यास गर्ने र सत्यता वास्तविकतामा जिउने गवाही छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। यदि तँसँग यो वास्तविकता छैन वा तँ यसअनुसार जिउँदैनस् भने, तँ दुष्ट कार्य गर्ने व्यक्ति होस् भन्‍ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। दुष्ट काम गर्नेहरूलाई परमेश्‍वरले कसरी हेर्नुहुन्छ? तेरा विचारहरू र बाहिरी कार्यहरूले परमेश्‍वरको साक्षी दिँदैन, न त तिनले शैतानलाई सर्ममा पार्छन् वा शैतानलाई हराउँछन्; यसको साटो, ती कुराले परमेश्‍वरलाई सर्ममा पार्छन्, र परमेश्‍वरलाई लज्जित पार्ने दागहरूले भरिएका छन्। तैंले परमेश्‍वरको लागि गवाही दिइरहेको हुँदैनस्, आफैलाई परमेश्‍वरको लागि समर्पित गरिरहेको पनि हुँदैनस्, न त तैंले परमेश्‍वरप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वहरूलाई पूरा गरिरहेको हुन्छस्; बरु, तैंले आफ्नै लागि मात्रै काम गरिरहेको हुन्छस्। “तेरो आफ्नै लागि” भन्‍ने वाक्यांशको अर्थ के हो? शैतानको लागि। त्यसकारण, आखिरमा, परमेश्‍वरले भन्नुहुनेछ, “दुष्ट काम गर्ने तिमीहरू मबाट दूर होओ।” परमेश्‍वरको नजरमा तैंले राम्रा कामहरू गरेको छैनस्, बरु तेरो व्यवहार बदलेर दुष्ट बनेको छ। तँलाई इनाम दिइनेछैन र परमेश्‍वरले तँलाई सम्‍झनुहुनेछैन। के यो पूर्ण रूपमा व्यर्थ छैन र? आफ्‍नो कर्तव्य पूरा गर्ने तिमीहरू प्रत्येकको लागि, चाहे तैँले जति नै गहन रूपमा सत्यतालाई बुझेको भए पनि, यदि तँ सत्य वास्तविकतामा प्रवेश गर्न चाहन्छस् भने, अभ्यास गर्ने सबैभन्दा सरल बाटो भनेको तैँले गर्ने हरेक कुराहरूमा परमेश्‍वरको घरको हितको बारेमा सोच्नु हो, अनि तेरा स्वार्थी चाहनाहरू, तेरा व्यक्तिगत आसय, अभिप्रायहरू, प्रतिष्ठा र हैसियतलाई छाड्नु हो। परमेश्‍वरको घरको हितलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्—कम्तीमा पनि तैँले गर्नुपर्ने कुरा यही हो।
तिमीहरू हरेकले आफ्नो कर्तव्य आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म खुला र इमान्दार हृदयसहित गर्नुपर्छ र जस्तोसुकै मूल्य पनि चुकाउनुपर्छ। जसरी तिमीहरूले भनेका छौ, जब त्यो दिन आउँछ, उहाँको निम्ति कष्ट भोग्ने र मूल्य चुकाउने कसैलाई पनि परमेश्‍वरले बेवास्ता गर्नुहुन्न। यस्तो प्रकारको दृढ निश्‍चयता पक्रिरहन लायकको छ, अनि तिमीहरूले यो कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुरा सही छ। यसरी मात्रै म तिमीहरूको निम्ति मेरो मनलाई सहजता दिन सक्छु। नत्रभने, तिमीहरू सधैँभरि यस्ता मानिसहरू हुनेछौ जसको बारेमा मेरो मन निश्चिन्त रहन सक्दैन अनि तिमीहरू मेरो अरुचिका पात्रहरू हुनेछौ। यदि तिमीहरू सबै आफ्नो विवेकलाई पछ्याउन सक्छौ र मेरो कामको निम्ति केही प्रयास बाँकी नराखी अनि मेरो सुसमाचारको निम्ति जीवनभरिको शक्ति अर्पण गरेर मेरो निम्ति आफ्नो सबै दिन सक्छौ भने के मेरो हृदय तिमीहरूको पक्षमा खुशीले उफ्रिने छैन र? यसद्वारा म मेरो मनलाई तिमीहरूको सम्बन्धमा पूर्ण रूपले निश्चिन्त तुल्याउन सक्छु, सक्नेछैन र?
वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “गन्तव्यको सम्‍बन्धमा” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने धेरैजसो मानिसहरूले खुसीसाथ आफूलाई उहाँको लागि अर्पण गर्छन् र उहाँमा समर्पित हुन्छन्। तैपनि, सच्‍चा भक्ति र बलिदान दिन सक्‍नेहरूसँग मात्रै साँचो वास्तविकता हुन्छ। धेरैजसो मानिसहरूले खुसीसाथ सत्यताको खोजी गर्छन्, तर तुलनात्मक रूपमा थोरैले मात्र यसलाई अभ्यास गर्न वा प्राप्त गर्नको लागि मूल्य तिर्न सक्छन्। जब महत्त्वपूर्ण क्षण आउँछ, र तँलाई बलिदान र त्याग गर्न अनुरोध गरिन्छ, तब तैँले यसलाई सहन सक्दैनस्; यो अस्वीकार्य हुन्छ, र यसले तँ परमेश्‍वरप्रति इमानदार छैनस् भन्‍ने देखाउँछ। यदि यो क्षण जति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, मानिसहरूले त्यति नै धेरै समर्पित हुन र आफ्‍नो स्वार्थी रुचि, अभिमान, र अहङ्कारलाई त्यागेर, आफ्‍नो कर्तव्य राम्ररी पूरा गर्न सक्छन् भने मात्रै, तिनीहरूलाई परमेश्‍वरले याद गर्नुहुनेछ। ती सबै असल कार्य हुन्! मानिसहरूले जे गरे पनि, कुन बढी महत्त्वपूर्ण छ—तिनीहरूको गौरव र स्वाभिमान कि, परमेश्‍वरको महिमा? (परमेश्‍वरको महिमा।) कुन-कुन बढी महत्त्वपूर्ण छन्—तेरा जिम्‍मेवारीहरू कि तेरा आफ्‍नै रुचिहरू? तेरा जिम्‍मेवारीहरू पूरा गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, र ती पूरा गर्नु नै तेरो कर्तव्य हो। यो कुनै नारा होइन; यदि तैँले आफ्‍नो अन्तस्करणभित्र त्यही ठान्छस् भने, र तैँले त्यसरी अभ्यास गर्ने प्रयास गर्छस् भने, के तँ थोरै वास्तविकतामा प्रवेश गरेको हुँदैनस् र? कम्तीमा पनि, यसको अर्थ तँसँग वास्तविकताको त्यो पक्ष छ भन्‍ने हुन्छ। निश्‍चित कुराहरूको सामना गर्दा, तेरो आफ्‍नै क्षणिक व्यक्तिगत इच्‍छाहरू र तेरो अभिमान र गौरव तेरो बाटोमा खडा हुन छोड्नेछ, र तैँले आफ्‍नै कर्तव्यलाई, परमेश्‍वरको इच्‍छालाई, उहाँको लागि गवाही दिने कार्यलाई, र तेरा आफ्‍नै जिम्‍मेवारीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछस्। गवाही दिने उत्तम तरिका यही हो, र यसले शैतानलाई सरममा पार्छ! यो सबैलाई देखेर, शैतानले के विचार गर्छ? यदि तैँले परमेश्‍वरको लागि साँचो गवाही दिन र शैतानलाई तेरो पिठ्यूँ फर्काउनको लागि वास्तविक कार्यहरूको प्रयोग गर्दै यसो गर्छस्, र तैँले नारा लगाउने काम मात्रै गरिरहेको छैनस् भने, शैतानलाई सरममा पार्ने र परमेश्‍वरको गवाही दिने त्योभन्दा राम्रो तरिका अरू केही छैन। परमेश्‍वरको लागि गवाही दिन र शैतानलाई त्याग्‍ने र इन्कार गर्ने तेरो सङ्कल्‍प शैतानलाई देखाउनको लागि विभिन्‍न विधिहरूको प्रयोग गर्नु कति गजब हुन्छ!
आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “परमेश्‍वर र सत्यतालाई प्राप्त गर्नु नै सबैभन्दा खुसीको कुरा हो” बाट उद्धृत गरिएको
मण्डलीका अगुवाहरूका रूपमा, तिमीहरूले प्रतिभाहरूको खोजी र संरक्षण कसरी गर्ने, र प्रतिभावान् मानिसहरूप्रति डाह कसरी नगर्ने सो कुरा सिक्‍नुपर्छ। यसरी, तिमीहरूले आफ्‍नो कर्तव्य चित्तबुझ्दो रूपमा निर्वाह गरेका हुनेछौ, र तिमीहरूले आफ्‍नो जिम्‍मेवारीलाई पूरा गरेका हुनेछौ; तिमीहरूले निष्ठावान बन्‍नको लागि पनि आफूले सक्दो गरेका हुनेछौ। केही मानिसहरू अरूले तिनीहरूको प्रसिद्धि चोरेर लैजानेछन्, तिनीहरूलाई उछिन्नेछन्, तिनीहरू स्वयमलाई भने बेवास्ता गरिएको बेला अरूले पहिचान प्राप्त गर्नेछन् भनेर सधैं डराउँछन्। यसले तिनीहरूलाई अन्य व्यक्तिहरूलाई आक्रमण गर्ने र पाखा लगाउने बाटोतर्फ लैजान्छ। के यो आफूभन्दा बढी सक्षम मानिसहरूको ईर्ष्या गर्नु होइन र? के यस्तो व्यवहार स्वार्थी र घृणायोग्य छैन र? यो कस्तो प्रकारको स्वभाव हो? यो दुराशययुक्त छ! आफ्नो बारेमा मात्र सोच्ने, आफ्नो मात्र चाहना पूरा गर्ने, अन्य व्यक्तिहरूको कर्तव्यहरूको बारेमा कुनै सोचविचार नराख्ने, अनि आफ्नो हितको बारेमा मात्र सोच्ने तर परमेश्‍वरको घरको हितको बारेमा केही नसोच्ने—यस्ता मानिसहरूसँग खराब स्वभाव हुन्छ र परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्न। यदि तिमीहरू परमेश्‍वरको इच्‍छालाई साँच्‍चै उचित ध्यान दिन सक्षम छौ भने, तिमीहरूले अरू मानिसहरूलाई उचित व्यवहार गर्न सक्‍नेछौ। यदि तैँले कसैलाई आफ्‍नो सिफारिस गरिस्, र त्यो व्यक्ति गोडमेल प्राप्त गरी प्रतिभावान् व्यक्ति बन्यो र यसरी परमेश्‍वरको घरमा अर्को एक प्रतिभावान् व्यक्ति भित्र्याइयो भने, के तैँले आफ्‍नो काम राम्ररी गरेको हुनेछैनस् र? त्यसपछि के तँ आफ्‍नो कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममा निष्ठावान भएको हुँदैनस् र? यो परमेश्‍वरको अघि गरिएको असल कार्य हो, र मानिसहरूमा हुनुपर्ने विवेक र तर्कशक्ति यही हो। सत्यतालाई अभ्यास गर्नेहरूले काम-कुराहरू गर्ने क्रममा परमेश्‍वरको छानबिनलाई स्वीकार गर्न सक्दछन्। जब तैँले परमेश्‍वरको छानबिनलाई स्वीकार गर्छस्, तेरो हृदयलाई सोझो तुल्याइन्छ। यदि तँ अरूलाई देखाउनका लागि मात्र काम गर्छस् भने, र परमेश्‍वरको छानबिनलाई स्वीकार्दैनस् भने, के परमेश्‍वर अझै पनि तेरो हृदयमा हुनुहुन्छ? यस्ता व्यक्तिहरूमा परमेश्‍वरको निम्ति कुनै आदर हुँदैन। सधैँ तेरो आफ्नै खातिर मात्र काम नगर् र निरन्तर आफ्नै हितको मात्र विचार नगर्; तेरो आफ्नो कद, इज्जत वा प्रतिष्ठालाई मात्र विचार नगर्। साथै मानिसहरूको चासोमा पनि ध्यान नदे। तैंले पहिले परमेश्‍वरको घरको हितको बारेमा सोच्नुपर्छ, र त्यसलाई तेरो पहिलो प्राथमिकता बनाउनु आवश्यक हुन्छ। तैँले परमेश्‍वरको इच्छालाई ध्यान दिनुपर्छ र तँ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने कार्यमा अशुद्ध भएको छस् कि, तैंले बफादार हुने सक्दो कोसिस गरेको छस् कि छैनस्, तेरा जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न सक्दो प्रयास गरेको छस् कि छैनस् र तँसँग भएका सबै कुराहरू दिएको छस् कि छैनस्, साथै तैंले परमेश्‍वरको घरप्रतिको आफ्नो कर्तव्य र कामका लागि सम्पूर्ण हृदयले ध्यान दिएको छस् कि छैनस् भनी विचार गरेर यो काम सुरु गर्नुपर्छ। तैंले यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। तिनको बारेमा बारम्बार विचार गर्, र यसरी तँलाई आफ्नो कर्तव्य राम्रोसँग पूरा गर्न सजिलो हुनेछ। यदि तँ थोरै क्षमता, सतही अनुभव भएको व्यक्ति होस् भने वा तेरो व्यावसायिक काममा निपुण छैनस् भने, तेरो काममा केही गल्ती वा कमजोरीहरू हुन सक्छन्, र त्यसका परिणामहरू धेरै राम्रो नहुन सक्छ—तर तैंले आफ्नो सक्दो प्रयास लगाएको हुन्छस्। जब तैँले आफूले गर्ने कामहरूमा आफ्नै स्वार्थी चाहनाहरूको बारेमा सोचिरहेको हुँदैनस् वा आफ्नै हितको बारेमा विचार गरिरहेको हुँदैनस्, तर त्यसको साटो मनमा निरन्तर परमेश्‍वरको घरको हितहरूलाई ध्यान दिइरहेको छस्, र तेरो कर्तव्य राम्ररी पूरा गरिरहेको छस् भने, तैँले परमेश्‍वरको सामु असल कार्यहरू जम्मा गरिरहेको हुनेछस्। यस्ता असल कार्यहरू गर्ने मानिसहरू सत्यता भएका मानिसहरू हुन्; त्यसरी नै, उनीहरूले गवाही धारण गरेका हुन्छन्।
चाहे तैँले आफ्‍नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको होस् वा व्यावसायिक ज्ञान सिकिरहेको होस्, तैँले गर्ने सबै कुरामा तैँले सिद्धान्तहरूको पालना गर्नुपर्छ। तैँले गर्ने सबै कुरालाई तैँले सत्यताअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ, र सत्यताअनुसार नै अभ्यास गर्नुपर्छ। समस्याहरूको समाधान गर्न, तँमा प्रकट गरिएका भ्रष्ट स्वभावहरूलाई समाधान गर्न, र तेरा गलत तरिका र विचारहरूलाई समाधान गर्न तैँले सत्यताको प्रयोग गर्नुपर्छ। तैँले यी समस्याहरूलाई निरन्तर पार गर्नुपर्छ। एउटा कुरा के हो भने, तैँले आफूलाई जाँच्‍नैपर्छ। तैँले त्यसो गरिसकेपछि, यदि तैँले भ्रष्ट स्वभाव पत्ता लगाइस् भने, तैँले यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, वशमा पार्नुपर्छ, र यसलाई त्याग्‍नुपर्छ। तैँले यी समस्याहरूलाई समाधान गरिसकेपछि, जब तैँले यी कुराहरू तेरा भ्रष्ट स्वभावहरूअनुसार गर्न छोडेको हुन्छस्, र जब तैँले तेरा अभिप्राय र रुचिहरूलाई त्याग्‍न र सत्यता सिद्धान्तअनुसार अभ्यास गर्न सक्‍ने भएको हुन्छस्, तब मात्रै तैँले परमेश्‍वरलाई साँचो रूपमा पछ्याउने व्यक्तिले गर्नुपर्नेजस्तो काम गरिरहेको हुनेछस्। के परमेश्‍वरले यो खास व्यवहार, काम गर्ने शैली, र आचरणलाई स्वीकारयोग्य पाउनुहुन्छ? उहाँले यसलाई स्वीकारयोग्य पाउनुहुन्छ; यो असल कार्य हो! तेरो काम गर्ने त्यस तरिकालाई किन असल कार्य मानिन्छ त? तैँले अरूको फाइदाको लागि, परमेश्‍वरको घरको कामको खातिर, वा परमेश्‍वरको घरको भलाइको लागि यो काम गर्छस्, यसको साथै, तैँले सत्यताको अभ्यास गरिरहेको हुन्छस्, त्यसैले परमेश्‍वरले यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, र यो असल कार्य हो। यदि तँ यही तरिकाले जिएको छस् भने, यसको अर्थ तैँले परमेश्‍वरको लागि गवाही दिइरहेको छस् भन्‍ने हुन्छ।
आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “सबै कुरामा सत्यताको खोजी गरेर मात्रै सत्यता वास्तविकतामा प्रवेश गर्न सकिन्छ” बाट उद्धृत गरिएको
मानिसहरूले आफ्‍नो कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममा आफ्‍नो हृदयमा के राख्छन्, र तिनीहरूले कति शक्ति लगाउँछन् सो परमेश्‍वरले छानबिन गर्नुहुन्छ र देख्‍न सक्‍नुहुन्छ। मानिसहरूले आफूले गर्ने कार्यमा तिनीहरूको सारा हृदय र शक्ति लगाउनु निकै महत्त्वपूर्ण छ। सहकार्य पनि निकै महत्त्वपूर्ण तत्व हो। यदि मानिसहरूले आफूले पूरा गरेका कर्तव्यहरू र आफूले गरेका कुराहरूमा कुनै पछुतो नगर्ने, र परमेश्‍वरको निम्ति ऋणी नबन्‍ने प्रयास गरे भने मात्रै, तिनीहरूले आफ्‍नो सम्पूर्ण हृदय र शक्तिले काम गरिरहेका हुन्छन्। यदि आज, तैँले तेरो सारा हृदय र शक्ति लगाउँदैनस् भने, जब पछि कुनै गलत कुरा आइपर्छ, र दुष्परिणामहरू देखिन्छन्, के त्यो बेला पछुताउनको लागि ढिलो भइसकेको हुनेछैन र? तँ सधैँको लागि ऋणी हुनेछस्; यो तेरो निम्ति कलङ्क हुनेछ! व्यक्तिको कर्तव्य प्रदर्शनमा कलङ्क हुनु भनेको अपराध हो। त्यसकारण, तैँले गर्नैपर्ने र गर्ने कुराहरूलाई तेरो सारा हृदय र शक्तिले उचित रूपमा गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई लापरवाही वा झारातिरुवा शैलीमा गर्नु हुँदैन; तँसँग कुनै पनि पछुतो हुनु हुँदैन। यसरी, तैँले यो बेला गरेका कर्तव्यहरूलाई परमेश्‍वरले स्मरण गर्नुहुनेछ। परमेश्‍वरले स्मरण गर्नुहुने कुराहरू असल कार्य हुन्। त्यसो भए, स्मरण नगरिने कुराहरू के-के हुन् त? ती अपराधहरू हुन्। यदि वर्तमानमा तिनको बारेमा यसरी व्याख्या गरियो भने मानिसहरूले ती दुष्ट कार्यहरू हुन् भनेर स्वीकार नगर्न सक्छन्, तर यदि यी कुराहरूको गम्‍भीर परिणामहरू देखा पर्ने दिन आयो, र ती नकरात्मक प्रभाव बने भने, यी कुराहरू व्यवहारगत अपराध मात्रै होइनन्, ती दुष्ट कार्यहरू नै हुन् भन्‍ने तैँले थाहा पाउनेछस्। जब तैँले यस्तो महसुस गर्छस्, तँलाई पछुतो हुनेछ, र तैँले मनमनै विचार गर्नेछस्: मैले अलिकति होसियारी अपनाएको भए हुनेथियो! अलिकति बढी सोचेको र प्रयास गरेको भए, मलाई यो समस्या हुनेथिएन। तेरो हृदयबाट यो अनन्त कलङ्कलाई कुनै कुराले पनि हटाउन सक्‍नेछैन, र यदि यसले तँलाई स्थायी रूपमा ऋणी तुल्यायो भने समस्या हुनेछ। त्यसकारण, तैँले आफ्‍नो कर्तव्य पूरा गर्दा, वा आज्ञा स्वीकार गर्दा, हरेकपटक तैँले आफ्‍नो सारा शक्ति र सारा हृदयले त्यो काम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तैँले त्यो काम आफूलाई ग्लानि र पछुतो नहुने गरी गर्नुपर्छ, ताकि यसलाई परमेश्‍वरले स्मरण गर्न सक्‍नुहोस्, र यो असल काम बन्‍न सकोस्। आधा मन लगाएर लापरवाही र झारातिरुवा शैलीमा काम नगर्; तँ पछुताउनेछस्, र गरिसकेको गल्तीलाई सुधार्न सक्‍नेछैनस्। यो अपराध बन्‍नेछ, र अन्तिममा, तेरो हृदयमा, ग्लानि, ऋणी भावना, र दोषारोपण हुनेछ। यी दुईमध्ये कुन मार्ग उत्तम छ? कुन मार्ग सही मार्ग हो? आफ्‍नो कर्तव्य आफ्‍नो सारा हृदय र शक्तिले पूरा गर्नु, र कुनै पनि पछुतो नहुने गरी असल कार्यहरू गर्ने तयारी गर्नु र त्यस्ता कार्यहरू बढाउनु। तेरा अपराधहरूलाई बढ्न नदे, तिनको बारेमा पछुतो हुने, र त्यसप्रति ऋणी भावना आउन दिने काम नगर्। व्यक्तिले धेरै अपराध गरेको छ भने के हुन्छ? तिनीहरूले परमेश्‍वरको उपस्थितिमा तिनीहरूमाथि उहाँको क्रोध ल्याइरहेका हुन्छन्! यदि तैँले अझै बढी अपराध गर्छस् भने, र तँप्रतिको परमेश्‍वरको क्रोध अझै बढ्दै गयो भने, अन्तिममा तँलाई दण्ड हुनेछ।
अघिल्लो: दुष्ट कार्यहरू भनेका के हुन् र तिनीहरूलाई कसरी प्रकट गरिन्छ
अर्को: आफ्नो कर्तव्य निभाउनु र सेवा प्रदान गर्नुबीचका भिन्नताहरू